Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey sagaal kale oo dheeri ah oo gobolka ah oo ay
Published August 19, 2020 at 10:22 AM CDT
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey sagaal kale oo dheeri ah oo gobolka ah oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka ka dhashey COVID-19. Websaydhka 'coronavirus' ee gobolka ayaa sidoo kale dabagal ku sameeyay in kabadan 300 oo kiis oo cusub muddo 24-saac gudaheed ah.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha wali si rasmi ah umay aqoonsan carada soo jiidata tirada kiisaska la xaqiijiyay. Tirada guud ee gobolka ee ku dhawaad 53,000 oo qof oo tijaabiyey cudurka tan iyo bishii Maarso wax saameyn ah kuma yeelan. Waxaa gobolka ka dhacay 989 dhimasho illaa galabnimadii Talaadada.
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa soo weriyey seddex kiis oo dheeri ah oo la xiriira wadar ahaan 3,832 iyo 54 dhimasho ah.
Saraakiisha caafimaadka ee Dakota County waxay raadinayaan laba xaaladood oo togan oo ah 1,927 dhammaan iyo 42 dhimasho ah.
Madaxweyne Donald Trump ayaa booqday Cedar Rapids salaasadii si uu u fiiriyo burburka kadib duufaan weyn oo dabaylo ah oo ku dhuftay qaybo ka mid ah Iowa usbuucii hore. Gudoomiyaha gobolka Reynolds ayaa sheegay in shilku ka xun yahay kana sii faafayo fatahaadda. Madaxweyne Trump ayaa ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono dib u dhiska gobolka.
Guddoomiye Reynolds wuxuu weydiistay $ 4 bilyan oo doolar oo caawinaad iyo maalgelin ah shaqsiyaadka ku nool 27 degmo. Sida laga soo xigtay FEMA, madaxweynaha ma aqbalin caawimaada shaqsiyeed wali.
Mas’uulka ugu sareeya doorashada gobolka Woodbury ayaa sheegay inuusan ka faallooneynin dacwad ay gudbisay ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo kooxaha Xisbiga Jamhuuriga.
Gobolka Woodbury waxaa lagu darayaa dacwad ka dhan ah codbixinta maqnaanshaha.
Saddexda degmo ee lagu magacaabay dacwadda, waxay u direen foomamka codbixinta codbixinta oo horay loo buuxiyay codbixiyeyaasha. Kooxaha jamhuuriga ayaa sheeganaya in qaababkani yihiin kuwo aan ansax ahayn maxaa yeelay waxay ku xad-gudbayaan amarkii Xoghayaha Gobolka ee ahaa in foomamka oo maran ay tahay in lagu diro.
Local News LocalIowaNebraskaSouth DakotanewsCOVID-19Somali
Waxaa jiray COVID-19 wanaagsan oo la soo sheegay oo ku yaal Dugsiga Hoose ee Morningside STEM ee Sioux City.Afayeen u ah Iskuullada Bulshada ee Magaalada…
Gudiga caafimaadka ee Siouxland waaxda caafimaadka waxay ansaxisay talo bixin maaskaro rasmi ah oo
Gudiga caafimaadka ee Siouxland waaxda caafimaadka waxay ansaxisay talo bixin maaskaro rasmi ah oo loogu talagay Degmada Woodbury taasi oo ka dhacda…
Madaxweyne Donald Trump ayaa booqan doona Cedar Rapids berri
Madaxweyne Donald Trump ayaa booqan doona Cedar Rapids berri. Trump ayaa maanta ansixiyay dalabka Iowa ee ku dhawaaqista musiibada weyn ee federaalka ka…